Ukhenketho lwefektri - Hebei Delin oomatshini Co., Ltd.
Umgangatho weemveliso zethu ungcono kunezinye iinkampani ezikwishishini elinye. Ukuvavanya ukuqala kokuphosa okwenziwe ngabaqhubi abanamava kunye nobuchule kunye nabahloli kuqinisekisa umgangatho ophezulu wazo zonke izinto kumatshini wonke.
Sinezixhobo zezixhobo zemveliso kubandakanya u-planomiller, i-lathe ethe nkqo, umatshini wokugrumba, umxube wokuhambisa, umatshini wokulungiselela isanti, ukunyibilikisa iziko, iziko lonyango olushushu, njl.
izixhobo zovavanyo lwezixhobo: ulwakhiwo lwe-metallographic, ukuqhubekeka kwezahlulo, ukusebenza ngomatshini, ukudibanisa, kunye nokusebenza kwemveliso kungenziwa ngesixhobo sokuhlola ukuhlalutya kunye nokuvavanya izinto, njengokutshutshiswa komvavanyi wokuqina, ukuvavanya amandla kwindalo yonke, ukuvavanya amandla, kunye nezixhobo zokulinganisa kunye nezixhobo zokuhlola ukusetyenziswa okukhethekileyo kunye nokusetyenziswa kwendalo iphela. Ngaphandle koko, sakhe iqonga lovavanyo lobuchule lokuvavanya iimveliso ezinjengeempompo.
Ukuvavanywa kokusebenza kweemveliso
UDelin ungumnini wesona siseko sikhulu sovavanyo lwamanzi kwislurry plump eMantla e-China. Ukusebenza kwemveliso kuya kuvavanywa ngaphambi kokuhanjiswa, ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nomgangatho weemveliso zethu.